jhapanews: May 2015
श्रीमानको औंला किन काटियो भन्दा श्रीमतीको पनि जागिर चट् ....!!
विराटनगर : विराटनगरस्थित विराटनगर अस्पतालमा उपचार गराउँदा एकजना बिरामीले जानकारीबिनै आफ्नो खुट्टाको दुई वटा औंला गुमाउनु परेको आरोप लगाएका छन्।
विराटनगर¬– ८ का विरेन्द्र झाले चिकित्सकको लापरवाहीका कारण आफूले खुट्टाका दुई वटा औंला गुमाउनु परेको बताएका छन् । उनले भने,‘दुर्घटनामा परेपछि उपचारका लागि अस्पताल गएको थिए । मलाई जानकारी नै नदिई चिकित्सकले औंला काटिएदिए ।
अस्पतालले आफ्नो औंला काटिदिएको विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराउँदै विराटनगरका विरेन्द्र झा । - See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/12378#sthash.rO05AMYJ.dpuf
विराटनगरमा बुधबार झाका परिवारले सामाजिक संघसंस्थाको पहलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने,‘तीन पटक अप्रेसन गरे पछि बुझ्दा स्पाइनलका डाक्टरले मेरो अप्रेसन गरेछन् । दुई वटा औंला नै काटेर फ्याँकिदिए ।’ उपचारमा संलग्न चिकित्सकले डा. सरोज कर्णले आफूलाई जानकारी नै नदिई देब्रे खुटटको दुई वटा औंला काटिदिएको झाको आरोप छ ।
कालोबाजारी आरोपित व्यापारी रातारात रिहा
विराटनगर : भूकम्प पीडितको नाममा त्रिपालमा कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका विराटनगरका दुई व्यापारी रातारात छुटेका छन् । सोमबार अबेरसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा भएको इजलासबाट उनीहरु धरौटीमा छुटेका हुन् ।
भन्सार छुटको त्रिपाल आयात गरी अत्याधिक मुनाफा खाई कालोबजारी गरेको आरोपमा गत बिहीबार अम्बिका बस्त्रालयका प्रदीप अग्रवाल र परनामी इन्टरप्राइजेजका जितेन्द्र सेठिया पक्राउ परेका थिए । अग्रवाल १५ लाख र सेठिया ११ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका हुन् । प्रहरीले कालो बजारी तथा सामाजिक अपराध ऐन २०६३ बमोजिम उनीहरुलाई मुद्दा चलाएको थियो । दुबैले बैंक ग्यारेन्टीको कागजात पेश गरेर राति छुटेका हुन् । उनीहरुलाई बयान गराउन प्रहरीले साढे ४ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगेको थियो । मोरङ प्रहरीका डिएसपी प्रभुप्रसाद ढकालले भने,‘उताबाट ल्याउनु भन्ने खबर आएपछि हामीले साढे ४ बजे दुबै व्यापारीलाई प्रशासनको इजलासतर्फ लगेका हौं ।’
कानुन व्यवसायीले यो मुद्दामा ५ घन्टा बहस गरेका थिए । तर, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशराज कार्कीले भने दुबै व्यापारीलाई प्रहरीले अबेर गरी हाजिर गराएकोले बहस अबेरसम्म चलेको बताए । उनले भने,‘बिगोअनुसार हामीले अत्याधिक धरौटी माग गरेका छौं । ‘रुल अफ ल’लाई हेर्ने हो भने धरौटीको यो रकम बढी नै हो ।’ प्रजिअ कार्कीका अनुसार यो मुद्दामा बिगोअनुसार जरिवाना, पाँच वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुने प्रावधान छ ।
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 7:34 AM No comments:
भूकम्प पीडितका नाममा कमाउ धन्दा
विराटनगर : भूकम्पपीडितका लागि भन्सार छुटमा ल्याइएको त्रिपालमा विराटनगरका व्यापारीले कालकोबजारी गरेका छन् ।
पीडितसम्म सस्तो र सरल मूल्यमा त्रिपाल पुर्‍याउन व्यापारीले आयात गर्दा सरकारले भन्सार छुट दिएको थियो । तर, विराटनगरका व्यापारीले नाफा कमाउने दाउमा बद्मासी गरेका छन् ।
व्यापारीले भन्सार छुटमा ल्याएको त्रिपाल ७८ प्रतिशतसम्म नाफा खाएर बेचेका छन् । २० प्रतिशतभन्दा धेरै मुनाफा राखी बिक्रीवितरण भए कालोबजारी हुन्छ ।
कालोबजारी गर्नेलाई कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही हुने कानुनी प्रावधान छ । सरकारलाई कर नतिरी ल्याइएको त्रिपालमा कालोबजारी भएपछि विराटनगरमा खैलाबैला भएको छ ।
भूकम्पपीडितको त्रिपालमा कालोबजारी
राहतस्वरुप पीडितसम्म पुग्नुपर्ने त्रिपालमा न्यून नाफा राखी बिक्री गर्न सरकारले सुझाएको थियो । तर, केही व्यापारीले उपभोक्तासँग १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर बिक्री गरेका छन् । विराटनगरको अम्बिका बस्त्रालयले भन्सार छुटमा ल्याएको त्रिपाल ७८ प्रतिशतसम्म मुनाफा खाएर बिक्री गरेको छ । उसले सरकारी सुविधामा ८ हजार ४ सय ४ थान त्रिपाल ल्याएको थियो ।
तर, बिक्री भने प्रतिगोटा एक हजार १ सय ४१ रुपैयाँमा गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रशासकीय अधिकृत रोहिणी आचार्यले भने, ‘न्यूनतम ७ सय ६७ रुपैयाँ गर्नुपर्नेमा अत्याधिक मुनाफा खाएको भेटियो ।’ प्रशासनले विराटनगरमा अनुगमन सुरु गरेसँगै कालोबाजरी भएको तथ्य बाहिर आएको हो ।
जिल्ला बजार अनुगमन समितिका संयोजक तथा मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले विपद्का बेला बद्मासी गर्ने कसैलाई नछाडिने बताए । ‘संकटका बेला सरकारी सुविधा लिएर ल्याइने सामानमा कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही हुन्छ’, उनले भने ।
अम्बिकाले ५३ लाख ६ हजार २ सय ५६ रुपैयाँ बराबरको त्रिपाल आयात गरेको थियो । औसत बिक्री ६३ लाख ६९ हजार १ सय ६८ हुनुपर्दथ्यो । (हेर्नुस भिडियाे)
बस्त्रालयका सञ्चालक प्रदीप अग्रवाललाई पक्राउ गरी शुक्रबार म्याद थप गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी प्रभूप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । ढकालले भने, ‘कालो बजारी ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउने तयारी गरेका छौं ।’
यसैगरी प्रणाम इन्टरप्राइजेजका जीतेन्द्र सेठ्ठी पनि कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । उनलाई पनि म्याद थप गरी प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ । प्रणामले ४५ हजार ६ सय १२ केजी त्रिपाल प्रतिकेजी २ सय ७२ रुपैयाँमा आयात गरी ३ सय ४२ प्रतिकेजीमा बिक्री गरेको पाइएको छ ।
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 4:46 AM No comments:
छाक कटाएर शरणार्थीले गरे भूकम्प पीडितलाई सहयोग
हुनेले समेत सहयोग गर्न हिच्कीचाएको र मुठ्ठी कसेको बेला ‘केही नभएका र अर्काको देशमा शरण लिएर बसेका’ भनिने भुटानी शरणार्थीले छाक कटाएरै उदार मनले नेपालका भूकम्प पीडितलाई सहयोग गरेका छन् ।
छाप्रोको बास छ । आफै दाताले दिने खाद्यान्नको भरमा छन् । जीवन गरिबी र अभाव बितिरहेको छ । उनीहरुको निरासाको फेहरिस्त निकै लामो छ । तर, तमाम समस्यालाई चिर्दै शरणार्थीले छाक कटाएरै भएपनि भूकम्प पीडितको लागि सहयोग जुटाएका छन् । यो काममा शरणार्थीका अगुवा र युवाले सक्रियता देखाएका हुन् । झापा र मोरङका शिविरहरुबाट उठाइएको खाद्यान्न सिन्धुलीका भूकम्प पीडितसम्म पु¥याइएको छ । ‘आफूलाई आश्रय दिने देशमा परेको विपद्लाई आफ्नै सम्झदै सहयोग गरेका हौं’,झापा दमकस्थित बेलडाँगी शिविरका सचिव सञ्चहाङ सुब्बाले भने,‘हरेक छाप्राबाट एक छाकको चामल, तेल, नुुन, बेसार,
हरियो सब्जी आदि खाद्यान्न संकलन ग¥यौं । सक्नेले नगद पनि सहयोग गर्नुभयो ।’
शरणार्थीहरु २५ वर्षदेखि नेपालमा शरणागत छन् । नब्बे हजार जति तेस्रो देशमा पुर्नवासका लागि गइसकेका छन् । तर, यहाँ हुनेले अभावबीच सहयोग गरिरहेको शरणार्थी अगुवा टिकाराम रसाइलीले बताए । उनले भने,‘विदेशमा भएकाले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ ।’
झापाको दमकस्थित बेलडाँगी र मोरङको शनिश्चरे शिविरका शरणार्थीले एकछाक खाना बराबरको सहयोग गरेका हुन् । उनीहरुलाई विश्व खाद्य कार्यक्रमले दुई साताका लागि प्रतिव्यक्ति ५ केजी ६ सय ग्राम चामल दिन्छ । अन्य खाद्यान्न पनि उपलब्ध हुन्छ । रसाइली भन्छन्,‘सहयोग दिन कसैले सानो मन गर्नुभएन बरु हामीले सोचेभन्दा धेरै जुट्यो ।’
शिविरहरुमा पाँच दिन लगाएर संकलन गरेको खाद्यान्न एउटा बस र ट्रकमा लिएर शरणार्थीको २२ सदस्यीय टोली सिन्धुली पुगेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको स्वीकृति र सल्लाहबमोजिम यो टोली सिन्धुली पुगेको हो । शनिश्चरे शिविर सचिव चम्पासिंह राईले भने,‘हामी अभावै अभावमा छौं तर राष्ट्रिय विपद्को यो समयमा हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेर नै सहयोग गर्न तम्सिएका हौं ।’
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 6:43 AM No comments:
आफ्नो गुन्यूचोलीको भोज रोकेर भूकम्प पीडितलाई एक लाख दिने ९ वर्षीया यशस्वी पोखरेल र उनकाे परिवार। - See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/11882#sthash.pi2MvYcb.dpuf
विराटनगर : विनाशकारी भूकम्पले सिंगै मुलुक नै शोकमा डुबेका बेला राष्ट्रिय स्तरका एकजना नेताले गरेको भव्य बिहे भोज र एकजनाले सर्वसाधरण बालिकाले गुन्यूचोली लागि छुट्टाएको एक लाख भूकम्पपीडितलाई दिएको दुई फरक प्रसंग अहिले विराटनगरमा निकै चर्चामा छन्।
मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूकम्पको शोकका बेला आयोजना गरेको छोराको बिहे भोजको आलोचना भइरहँदा विराटनगरकी ९ वर्षीया यशस्वी पोखरेलले आफ्नो गुन्यूचोली पार्टी रोकेर एक लाख रकम भूकम्प पीडितलाई दिएकी छिन्। भूकम्पको शोकमा नेताको देखाएको शान र बालिकाको सहयोगी मन यहाँका टोलटोल र घरघरमा अहिले चर्चा भइरहेको छ। यशस्वीले सबैबाट स्याबासी पाएकी छन्।
गुन्यूचोली कर्मपछि भोजका लागि छुट्टाइएको एक लाख बालिकाले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यलय मोरङमार्फत भूकम्पपीडितलाई दिएकी हुन् । आइतबार गुन्यूचोलीको भोज गर्ने कार्यक्रम थियो तर बालिकाकै इच्छामा भोज स्थगित गरेर भूकम्पपीडितलाई दिइएको हो ।
गुन्यूचोलीको भोज रोकेर बालिकाले दिइन् भूकम्पपीडितलाई एक लाख
यादवले वैशाख २९ गते आफ्ना छोराको विवाह धुमधामसँग गरे। विराटनगरमा विवाह भोज पनि उस्तै तामझामसाथ भयो । गाडी र आगन्तुकको लावालस्कर नै लागेको थियो । मुलुक महाविपद्मा परेको बेला भएको विवाह र भोजको निकै टिकाटिप्पणी पनि भयो।
यादवले महाभूकम्पको विपद्मा परेका पीडितलाई छोराको नाममा एकसुका पनि दिएनन् तर विराटनगर– ६ की ९ वर्षीया यशस्वी पोखरेलले भने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आफ्नो गुन्यूचोली कर्मपछि आयोजना हुने भोजमा खर्च गर्न ठिक्क पारेको सबै रकम भूकम्प पीडितलाई सहयोग गरेकी छिन् । यादवले महाविपद्को बेला तामझामका साथ छोराको विवाह र भोज गरेको विषयमा विराटनगरको सामाजिक वृतमा आलोचना भइरहँदा यशस्वीले भने स्याबासी पाइरहेकी छिन्।
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 1:06 AM No comments:
बिहारका विधायक छुटे, जोगबनीका मेयरलाई दश वर्ष जेल
विराटनगर : विराटनगरका व्यापारी तुलसीराम अग्रवाल अपहरण काण्डका आरोपित भारतको बिहार राज्य विधान सभाका विधायक जाकिर हुसेन खानलाई मोरङ जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको छ।
जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा कसुरदार नरहेको र निर्दोष भएको ठहर गर्दै सफाई दिएको हो। खान बिहारको अररिया जिल्लाबाट बिहार विधान सभामा जनता दल युनाईटेडका निर्वाचित विधायक हुन् । मोरङ जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायधीश शेखर पौडेलको इजलासले हुसेनलाई सफाई दिएको हो।
अर्का आरोपित भोलाशंकर तिवारीलाई भने दश वर्ष जेल सजायको फैसला भएको छ । तिवारी भारतको जोगबनी नगरपालिकाका पूर्व मेयर हुन् । उनी सिन्धुली कारागारमा पुर्पक्षका लागि अढाई वर्षदेखि थुनामा छन्। घटनामा संलग्न भारत सहर्षाका पप्पु देव भूमिहार सर्वोच्च अदालतले २०७१ पुस २८ गते गरेको फैसलाबाट दश वर्षका लागि जेल भुक्तान गरिरहेका छन्।
हुसेन विगत अढाई वर्षदेखि तारेखमा रही अदालतमा हाजीर भइरहेका थिए । अदालतले निर्दोष रहेको फैसला गरेपछि हुसेनले भने,‘म अदालतको न्यायको सम्मान गर्दछु । अपहरण कान्डमा मेरो कुनै संलग्नता नरहेको सम्मानित अदालतबाट फैसला भएको छ। यो अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ।'
व्यापारी तुलसीराम अग्रवाल अपहरण काण्ड
यो अवधिमा आफूले हप्तामा एक पटकसम्म बिहारको राजधानीबाट विराटनगर अदालतको तारेखमा आएको, सदनमा सपथग्रहणका बेला तारेख पर्दा त्यो अवसरसमेत छाडेको र श्रीमती बिरामी पर्दा पनि अदालतको मान राख्दै उपस्थित भएको बताए ।‘विधि र कानुन मिच्दै मैले कसैको अपहरण गर्ने कुरै थिएन,’ उनले भने,‘मेरो कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने फैसलाबाट पुष्टि भएको छ । म सन्तुष्ट छु । अब राजनीतिक जीवनमा म माथि कुनै दाग छैन् ।'
Posted by रोहित (कुमार लुइँटेल) at 10:06 PM No comments:
श्रीमानको औंला किन काटियो भन्दा श्रीमतीको पनि जागि...